Shwe Sar – Page 587 – Shwe Sar
မြန်မာပြည် မှာ ကိုဗစ်လူနာ တွေ့ရှိမှုနှုန်း လျော့ကျ လာပေ မယ့် သေဆုံးနှုန်း မြင့်တက်လာ ရတဲ့ အကြောင်းရင်း
အောက်တိုဘာ ၉ သုံးသပ်ချက် ကိုဗစ် သေနှုန်းက ဘာကြောင့် တက်လာတာလဲ? အဖြေရှာ ဖို့တော့လိုနေပါပြီ ကိုဗစ် သေနှုန်းကို လူနာတွေထိုးတက်လာတဲ့ စက်တင်ဘာ ၂၁ ကနေ ၃၀ အထိ ပြန်ကြည့် တာ တရက်ပျမ်းမျှ […]
ပရိသတ်တွေ မမြင်ဘူးသေးတဲ့ တစ်ချိန်က ခပ်မိုက်မိုက် ပုံရိပ်လေးတွေကို ပြန်လည်ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ နန်းသီရိမောင်
ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ နန်းသီရိမောင်ကတော့ တိုင်းရင်းသူလေးဖြစ်ပြီးအမိုက်စား အချိုးကျကျ ခန္ဓာကိုယ်အလှတရားပေါ်လွင်စေတဲ့ အလန်းစားပုံလေးတွေနဲ့ ပုရိသတွေအသည်းနှလုံးကို ဖမ်း စား ထား တဲ့ မော်ဒယ်မလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။သူမရဲ့ အမိုက်စားဖက်ရှင်တွေနဲ့ အလန်းစားပုံလေးတွေကတော့ ပရိသတ်တွေ အတွက် ကြွေသွားစေလောက်တာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ် ။ […]
အစိုးရက အလကား ကုပေးနေတဲ့ ကိုဗစ်ကုသဆေးတလုံး ရဲ့ တန်ဖိုး (အဲဒီလောက်တောင် ရှိတာလား?)
ကာကွယ်ဆေးအတွက် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံက သူမ ကြိုးပ မ်းနေကြောင်း ပြောသွားတယ်။ အခု ကိုဗစ် ကုသဆေး ရမ်ဒက်ဆီဗား တွေဝယ်ပြီး ကုသပေးနေပါပြီတဲ့။ MRTV Live မှာ ပြော ကြား သွားတယ်။ ဒီဆေးဟာ ဆေးတစ်လုံးကို […]
အတွင်းသားတွေပေါ်လွင်အောင် မိမိုက်လွန်းတဲ့ ဖက်ရှင်လေးနဲ့ အပြတ်ဂေါ်နေတဲ့ Xmue Xmue
photo model အမှူး က တော့ လက်ရှိမှာ အောင်မြင်လျက် ရှိနေတဲ့ photo model တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်ကို တ င်ပေးလေ့ရှိတဲ့ သူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။အမိုက်စားဖက်ရှင်လေးတွေ အလန်းစား ဖက်ရှင်လေးတွေ […]
ကမ်းခြေမှာ ဘစ်ကနီနဲ့ လန်းလွန်းနေတဲ့ ချိုဇင်ဝင်းပြည့် ရဲ့ ပုံရိပ်များ
သွယ်လျတဲ့ အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဆက်ဆီ မော်ဒယ်လ် ချိုဇင်ဝင်းပြည့် ကိုသိကြမယ် ထင်ပါတယ်။ဆွဲမက်ဖွယ်ရင်သပ်ရှုမောစရာ အမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ပုရိသေ တွရဲ့ ရင်ကို ဆွဲဆောင်ညို့ယူထားတဲ့ အလန်းစား မော်ဒယ်သရုပ်ဆောင်လေးဖြစ်ပါတယ်။သွယ်လျ ပြေပြစ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတူ လှပကြည်လင်တဲ့ အသားအရေကိုပါ ပိုင်ဆိုင် […]
သိထားသင့်သည့် ဆေးဖက်ဝင်အပင်များနှင့် ၄င်းတို့၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
နွယ်မြက်သစ်ပင် ဆေးဖက်ဝင်ဟု ဆိုသော်လည်း လောကနိယာမ သဘောအရ အကောင်းနဲ့အဆိုးကတော့ အမြဲဒွန်တွဲလျက် ရှိနေကြစမြဲပါ။ တချို့သစ်ပင်တွေမှာ လူသားတို့၏ ကျန်းမာရေးအတွက် အားသာချက်တွေ တော်တော်များများ ရှိကြပါတယ်။ သို့သော် လူတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ကြံ့ခိုင်မှုစွမ်းရည်ချင်း မတူညီကြတာကြောင့် ၎င်း အ […]
အ ပျိုဖော်ဝင်စ မိန်းခလေး ငယ်လေး များ ကို ဖတ်စေချင် ပါတယ်
အပျိုဖော်ဝင်စငယ်သွေးကြွလှပ ဆိုသောစကားသည် မိန်းခလေးတယောက်အပျိုစဖြစ်စတွင်လှပမူကိုတင်စားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မိန်းခလေးငယ်တစ်ယောက်အပျိုစဖြစ်စသော ကိုယ်ခန္ဓာပြောင်း လဲမူ ကို သိထားသင့်သောအချက်များကို OnDoctor တွင် အမေးများလေ့ရှိပါတယ်။မိဘများအနေဖြင့်လည်းမိမိသမီးငယ်ကို ပြောင်းလဲလာသောလူနေမူပတ်ဝန်းကျင်စိတ်မချမူကြောင့် အပျိုေ ဖာ် ဝင်သည့်အချက်များကို စောစီးစွာသတိထားသိချင်သောဆန္ဒကြောင့်မေးကြပါတယ်။ (1)အပျိုစဖြ စ်သောအ သက်အရွယ်မိန်းခလေးတစ်ယောက်အနေဖြင့် အသက် ၈နှစ်မှ […]
မိမိုက်လွန်းနေတဲ့ ဖက်ရှင်လေး နဲ့. ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိ လှနေတဲ့ ခင်အင်ကြင်းကျော်
မြင်သူ တိုင်းငေး လော က် တဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်ကောက် ကြောင်း အလှကို ပိုင်ဆိုင်ထား တဲ့ မော်ဒယ်လ်ခင်အ င်ကြင်းကျော် ကို သိကြမယ် ထင်ပါတ ယ်နော်။ မော်ဒယ်လ်ေ လာက ကိုဝင်ရောက်တာ […]
သိန်းရာကျော်တန် ဆိုင်ကယ်ပေါ်မှာလုံးဝဂေါ်နေတဲ့ မော်ဒယ် နန်းသီရိမောင်
မင်္ဂလာပါ ဆယ်လြီ မင်ကွင်း ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ ခနာကိုယ် အချိုးအစားနဲ့ အဲဗားလန်းနေတဲ့ မော်ဒယ်နန်းသီရိမောင်ဟာ ပရိတ်သတ်တွေကြား အခုချိန်ထိ နာမည်ကြီးတဲ့ မော်ဒ ယ်တ စ်ယော က်ဖြစ်ပါတယ်။ မြင်တဲ့သူတိုင်း ဟာခနဲဖြစ်သွားအောင် ဓာတ်ပုံတွေ […]
လက်ရှိ ပညာသင်နှစ် တနှစ်လုံး မပိတ်သေး၊ ကိုဗစ်ထိန်းချုပ် နိုင်ပါက ကျောင်းတွေ ချက်ချင်း ပြန်ဖွင့်သွားမည်
ကို ဗစ်ကပ်ရိုက်ခတ်မှုကြောင့် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ နဲ့ စာသင်ကျောင်းတွေကို ပိတ်ထားပေမယ့် နေအိမ်တွေကနေသင်ကြားတဲ့စနစ်နဲ့ ဆက်လက်သင်ယူနိုင်ဖို့ရုပ်သံလိုင်းတွေ၊ ရေဒီယိုေ တွ ၊ အွန်လိုင်း ပလက်ဖောင်းကတဆင့် သင်ခန်းစာတွေပို့ချထုတ်လွှင့်သွားဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့ အခြေခံပညာဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကိုလေးဝင်းက ပြောပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်း […]